E-News Nepali || Fast and Accuracy » मनभरी पिडा भएपनि आफ्नो सन्तानको लागि मुस्कुराउने भगवानलाई ‘आमा’ भनिन्छ
भन्ने कुराले अर्थ राख्छ !’ त्यस्तै नोभेम्बर २ मा उनले लेखेकी छिन् – ‘तब सम्म कमाउनुस जब सम्म “महङ्गो” चिज “सस्तो” लाग्दैन चाहे त्यो “सामान” होस या “सम्मान” !!’नोभेम्बर ३ मा अझै सेड मुडमा देखिएको हिमानीले घतलाग्दो स्टाटस लेख्दै भनेकी छिन्- ‘को पो छन र खुसी यहा?? कही कतै अपुरो सपनाले आशू टीलपिल गरेर, मुस्कुराउनै दिदैन !!’ त्यस्तै नोभेम्बर ५ मा उनले अर्क्जो स्टाटस लेख्दै छोडेर जानेहरुलाई झरीजाने रुखको पातको संज्ञा दिएकी छिन । उनले लेखेकी छिन- ‘यदि कोहि तपाईहरुको साथ छोडेर जान्छ !! भने जान दिनुस् किनकी रुखलाई छाडेर जाने पातहरु सधै कुहिएर नै जान्छ
‘लेख्नेले लेखेको कुरा पढ्नेवालाले, सम्झिदैनन् ” किनकी लेख्नेवाला भावना लेख्छ ” पढ्नेवालाले शब्द पढ्छन् !! जतिसुकै रमाइलो ठाउँ भएनि आफुलाई मन परेको मान्छे त्यहा छैन भने त्यो ठाउँ शुन्य नै लाग्दछ !! जन्म पछि बाँडिने मिठाई देखी सुरु हुन्छ जिन्दगीको यो खेल र श्राद्ध को खिरमा आएर, सकिन्छ यही नै जिन्दगीको मिठास हो प्रतिसोध लागी होइन प्रेमका लागी हो जिन्दगी त्यसैले सकारात्मक अनि असल कर्म गर्नु पर्दछ !!’
सोनिकाले भनिन् पारस सरकारका कारण ममा चेन्ज धेरै आध्यात्मिक चेन्ज आएको छ, उहाँ मेरो मिल्ने साथी हो ।’ टिकटकमा पूर्वयुवराज पारस र सोनिकाको एक भिडियो सार्वजनिक भएपछि सामाजिक सञ्जालमा पारसको विरोध शुरु भएको थियो । सुमन नामक युवकले टिकटकमा १५ सेकेन्डको भिडियो सार्वजनिक गरेका थिए । भिडियोमा पारस शाहले बाइकमा सोनिकालाई कुरिरहेका हुन्छन् । पोखरामा खिचिएको उक्त भिडियोमा पारसले केही नेपालीलाई राजावादी भनेर नछुट्याउन र सबैलाई नेपाली भन्न अनुरोध गरेका छन् । उनले भिडियोमा भनेका छन्, ‘यो वादी र ऊ वादी भनेर छुट्याउने होइन, हामी सबै नेपाली हो ।
राजावादी र नेपालीबीचको कुरा चलिरहँदा युट्युबर सोनिका रोकाया बाइक नजिक आउँछिन् । लगत्तै पारसले बाइक स्टार्ट गर्छन् । र दुवै हुइँकिन्छन् । यता सोनिकाले आफूले बिल तिरेर भित्रबाट आएको र कसैले लुकेर भिडियो खिचेको आफूहरुले थाहा नपाएको बताइन् । म रेष्टुरेन्टबाट बिल तिरेर निस्किरहेकी थिएँ, हामीले ड्रिङ्क गरेर निस्किरहेका थियौँ, उहाँले बाहिर केही राजावादीलाई यो वादी र ऊ वादी नभन्नु भन्नुभएको रहेछ, सोनिकाले भनिन् मलाई के थाहा त्यहाँ क्यामेराले खिचिरहेको छ भनेर म त बिल तिरेर बाहिर आएँ म उहाँसँग आएको थिएँ भने उहाँसँगै जान्छु नि ।
उनले सोही होटलमा बसेर टिकटक भिडियो बनाएर आफूले अपलोड गरेको पनि बताइन् । सोनिकाले आफ्नो वृत्तिलाई मिडियाले नेगेटिभ बनाइदिएको र त्यहीअनुसार आफू हिँड्न चाहेको बताइन् । म उच्छृङ्खल किन भएँ ? कारण समाज नै हो, सधै मलाई नेगेटिभ मात्र भन्यो उनले भनिन् कपिल शर्मासँग अन्तर्वार्ता लिँदा कसैले कभर गरेन अहिले भने यसरी मिडियामा आयो ।
सोनिकाले पारससँग भेट भएपछि आफूमा धेरै परिवर्तन आएको र पारसले सधै आफूलाई मोटिभेट गरेको पनि बताइन् । ‘म कस्तो बोल्थेँ, कस्तो नराम्रो थिएँ, कस्तो ड्रेसअप गर्थें, अहिले हेर्नुस् त, मैले पूरै ज्यान ढाक्ने कपडा लगाउन थालेकी छु, पारस सरकार राम्रो मान्छे हो,’ उनले दाबी गरिन् । ‘पारस सरकारले ममा भएको नेगेटिभिटीलाई हटाइदिनुभयो उहाँले देशका लागि केही गर्नुपर्छ भन्ने पार्दिनुभयो, यसलाई पनि मान्छेले नकारात्मक सोचिरहेको छ उनले अगाडि थपिन् ।
प्रकाशित मिति २४ कार्तिक २०७६, आईतवार १५:०२